Orinasa kely momba ny fivezivezena ultrasonic mivezivezy - Mpanamboatra sy mpamatsy rafitra fantsom-pandrefesana ultrasonic mizana kely China
Fitaovana fanaparitahana ultrasonic 20Khz
Ny teknolojia fanaparitahana ultrasonic dia mandresy ny olan'ny fanaparitahana nentim-paharazana fa tsy dia tsara loatra ireo poti-fanaparitahana, milamina ny ranona fanaparitahana ary mora esorina.
Fanodinana ultrasonic dispersion ho an'ny nanoparticle
Tao anatin'izay taona lasa izay, ny nanomaterial dia be mpampiasa amin'ny indostria isan-karazany hanatsarana ny fahombiazan'ny fitaovana. Ohatra, ny fampidirana graphene amin'ny bateria lithium dia afaka manitatra ny androm-piainan'ny bateria, ary ny manampy silikôida azony amin'ny vera dia mety hampitombo ny mangarahara sy ny hamafin'ny fitaratra. Mba hahazoana nanoparticle tena tsara dia ilaina ny fomba mahomby. Ny cavitation ultrasonic dia mamorona faritra misy tsindry avo sy ambany ambany ao anaty ny vahaolana. Ireo h ...